के ठूला अनुयायीहरू साँच्चै गन्ती गर्छन्? | Martech Zone
बिहीबार, मार्च ० 25, २०२० आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यदि म १०० सदस्यहरू वा १००० अनलाइन ग्राहकहरू थप्न सक्दछु भने, यसले मेरो तल्लो लाइनमा फरक नपार्न सक्छ। मलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ ठिक ग्राहकहरु वास्तवमा तिनीहरु बाट व्यापार प्राप्त गर्न। मैले यो पनि विगतमा लेखेको छु मार्केटिंग आँखाका पखेटा होइन, यो आशय को बारे मा छ।
के मैले मेरो सोच परिवर्तन गरेको छु? होईन, जब यो विज्ञापन आउँछ।
मलाई तपाईंसँग कति कुल अनुयायीहरू वा सदस्यहरू छन् भन्ने बारेमा मतलब छैन, म ती अनुयायीहरू वा ग्राहकहरूको स about्ख्याको ख्याल राख्छु जसको साझा रुचि छ वा मेरो लागि सम्भावित ग्राहक हुन सक्छ। यदि तपाईं आफ्नो नेटवर्कमा विज्ञापन गर्ने क्षमता प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने, म यो गर्दछु यदि संख्या सान्दर्भिक अनुयायीहरू वा ग्राहकहरू मेरो व्यवसायको लागि सहि छ - केवल किनभने तपाईसँग ठूलो नेटवर्क छ।
त्यहाँ एक लाभ छ ठुलो संख्यायद्यपि। यो पदोन्नती र अधिकार हो।
संख्यामा गति छ। कम अनुयायी गणनाले कम फलोअर अपननको कारण दिन्छ। तपाईंसँग उत्तम ब्लग, ट्विटर खाता वा ब्रह्माण्डमा फेसबुक पृष्ठ हुन सक्छ ... तर यो अनुयायीहरू थप्न दिक्क लागीरहेको छ जब तपाईंसँग कुनै छैन। यदि तपाइँसँग १०० अनुयायीहरू छन् भने, यसले स्वाभाविक रूपमा २०० मा पुग्न हप्ताहरू वा महिना लिन सक्दछ, उत्तम सामग्रीको साथ पनि।
संग 10,000 अनुयायीहरूयद्यपि तपाई एक दिन १०० जोड्न सक्नुहुनेछ! त्यहाँ दुई कारणहरू छन्:
ठुलो संख्याले पुष्टि गर्दछ कि तपाईं एक ठूलो सम्झौता हो। मलाई थाहा छ कि हास्यास्पद लाग्छ, तर यो सत्य हो। व्यक्ति अल्छी छन् ... तिनीहरू तपाईंको ट्विटर पृष्ठ, तपाईंको फेसबुक पृष्ठ वा तपाईंको ब्लगमा हेराई गर्दछन् र उनीहरू तपाईं पत्ता लगाउन खोज्छन् कि तपाईं कति ठूलो सम्झौता हुनुहुन्छ। यदि तपाईंसँग ठूलो संख्या छ भने, तिनीहरू फलो बटन क्लिक गर्न सजिलो हुन्छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य हो। यो किन हो किन म मेरो साइडबारमा र्यान्किंग ब्याजहरू देखाउँछु।
ठुलो संख्याले तपाईंलाई पदोन्नति गर्ने अनुमति दिन्छ। धेरै वर्ष अघि मैले एउटा परीक्षण गरें जहाँ मैले घोषणा गरें कि मेरो ब्लगले इन्टरनेटमा सब भन्दा राम्रो मार्केटिंग ब्लगको रूपमा एक पुरस्कार जितेको हो। मैले एक टन गुरिल्ला मार्केटिंग गरें र जताततै यसलाई बढावा दिएँ। मेरो ब्लगको पाठकहरूको नतिजा ठूलो भयो। मैले त्यसपछि यो कसरी गरे भनेर एक पोष्ट लेखें।
मैले अरू ब्लगरहरूलाई पनि यो गरेको देखेको छु। पछाडि जब तपाईं फिडबर्नरको ग्राहक गणना ह्याक गर्न सक्नुहुन्थ्यो, मैले केहि धेरै प्रभावशाली ब्लगरहरूलाई पूरा फाइदा लिन र गरेको गरेको देखें। तिनीहरूको ब्लग लोकप्रियता मा आसमान छ - यो अविश्वसनीय थियो। म शुद्ध धोकेबाजमा हिचकिचाएको छु (जबसम्म यो त्यस्तो अतुलनीय सरल छैन कि मैले मानिसहरूलाई भर्खर एउटा पाठ सिकाउनुपर्थ्यो जुन यसको विकास भयो)।
म धोखा वा वकालत गर्दैछु वा अनुयायीहरू खरीद गर्दैछु? त्यो तपाईं माथि निर्भर छ। म वास्तवमै तपाईंलाई यो भन्न लागिरहेको छैन कि यो नराम्रो चीज हो वा राम्रो चीज हो। म भर्खरै मात्र भन्छु कि यसले गर्दछ, वास्तवमा काम गर्छ।
म हाल प्रचार गर्दैछु मेरो ट्विटर खाता सुविधित प्रयोगकर्ताहरूसँग र सय नयाँ नयाँ अनुयायीहरू जोडेका छन्। यो राम्रो सेवा हो जुन अनुमतिमा आधारित हो, त्यसैले म धोखा वा अनुयायीहरू खरीद गर्दै छैनन - म आफैंलाई बढावा दिदैछु। मेरो लक्ष्य १००० भन्दा बढी अनुयायीहरू छिट्टै भन्दा छिट्टै प्राप्त गर्ने हो।
विशेष उपयोगकर्ताहरु मा एक नोट: म ठूलो को लागी भुक्तान गर्ने छैन एक पटक किन्नुहोस् भविष्यमा प्याकेज मेरो अपनन अभियानको शुरुमा नै आस्रुक्केट भयो र पछि झर्दै गएको छ - सायद किनभने मेरो अनुहार उही व्यक्तिलाई दिईएको छ म पनि मेरो स्थान परिमार्जन गरेको छु जब तिनीहरू भौगोलिक रूपमा लक्षित छन्। भविष्यमा, मलाई लाग्छ म केवल विज्ञापनको सबैभन्दा सानो रकम खरीद गर्नेछु र त्यसपछि उनीहरूको साथ अभियान कार्यान्वयन मासिक सदस्यता.
दश हजार अनुयायी प्रचार गर्नका लागि एक राम्रो संख्या हो। किनकि म अगस्तमा बाहिर लेख्ने किताब लेख्दै छु (कर्पोरेट ब्लगिंग फर डमीहरू), म मेरा सबै नम्बरहरू - फेसबुक, ट्विटर, र मेरो फिड सदस्यहरूमा लिन चाहन्छु। यस प्रकारले मेरो नेटवर्क भित्र प्रचार गर्न ठूलो छ र म अधिक व्यक्तिहरु लाई छुन सक्छु।
त्यसोभए ... हो, म विश्वास गर्दछु कि ठूला संख्याहरू छन्!
टैग: गन्तीप्रशंसकअनुयायीहरूलाईकति वटालाइकसंख्याहेराइहरू
ईमेल सूची भाडा, तपाइँले के जान्नुपर्दछ
मार्स 26, 2010 मा 10: 58 एएम
चाखलाग्दो दृष्टिकोण, यसलाई साझा गरेकोमा धन्यवाद।
म तपाईंसँग सहमत छु, ठूलो संख्याहरू गणना गर्दछ, यद्यपि यसले तपाईंको साइटमा प्रवाहित व्यवसायहरू प्रतिबिम्बित गर्दैन। ठुलो संख्याले अधिक योग्य लिडमा संलग्न गर्न मद्दत गर्दछ, किनकि तिनीहरू पहिले नै त्यहाँ उपस्थित भीडबाट प्रभावित र आकर्षित हुन्छन्। त्यसोभए तपाईंले कार्य गर्नुपर्नेछ। वास्तवमा, एक सल्लाहको रूपमा म तपाईंलाई सुझाव दिन्छु कि तपाईंको फेसबुक फ्यान पृष्ठमा सूचीहरूको फाइदा लिन। सूचीमा फ्यानहरूलाई वर्गीकृत गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि सम्भावित ग्राहकहरू को हुन् र को होइन।
यदि तपाईंलाई यसको बारेमा कुनै प्रश्नहरू भए, तपाईं यस साइटमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ http://bit.ly/azEurc र तपाइँका चिन्ताहरू राख्नुहोस् र त्यहाँ विशेषज्ञहरूबाट द्रुत उत्तरहरू पाउनुहोस्।